Ceerigaabo, 21 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Walaalayaaloow Maanta Iga Barta Sida Loola Tacaalo Qaniinyada Masaska Iyo Abeesooyinka
Dhowr bilood guduhood ayaa la soo sheegayaa in shilalka qaniinyada masasku ay gaadhey ilaa sadex boqol dhulka Soomaalidu degto ee Kenya. Haddaba waxaa muhiima inaad ogtahay ama taqaano waxyaabo aasaasi u ah inaad badbaadiso naftaada ama qofka masku qaniinay.
Siyaabaha loola dagaalamo qaniinyada masaska waxa ugu muhiimsan:
1) Ugu horeyn waa inaad ka dhaqaaqdo meesha masku kugu qaniinay si aanu mar labaad kuu qaniinin, taaso labanlaabaysa dhibtii ku haysatey. Hadii uu maskii cararay uma baahnid inaa daba orodo waayo waqtiga aad gelinayso dilitaankiisa waxaa kaaga wanaagsan inaa dhaawacaaga ku mashquusho.
2) Dadka ku taqasusay qaniinyada masaska waxay ku celceliyaan markay ka hadlayaan sida loola tacaalo qaniinyada maska, IS DEJI, IS DEJI (Waxaan far waaweyn ugu qorey muhiimada ay leedahay inaad is dejiso).
Badbaadadaada waxay 75% ku xidhan tahay garaaca wadnahaaga siduu yahay. Hadii werwer iyo argagax ku galo waxaa kordhaya garaaca wadnahaaga marka wadnahu xoog isu garaaco waxaa kordhaya xawaarihii wareega dhiiga taasoo keenta in ilbidhiqsiyo ay suntu ku gaadho wadnaha iyo meel kastoo jirka ka mid ah. Sidaa darteed isku day in aadan argagixin, cabsidana yareyso si aanu wadnahaagu u kordhin howshiisa.
3) In meesha lagaa qaniinay ay had iyo jeer ka hooseyso wadnaha, si aanay si fudud suntu ugu soo gaarin wadnaha.
4) Ha saarin meesha lagaa qaniinay baraf ama wax qabow.
5) Hadii dhiig ka socdo meesha la qaniinay ha joojin dhiiga markaba hadii aadan ka baqayn dhiigbax, waayo suntii ayaa soo raacaysa.
6) Hadii aad xidhan tahay dahab ama wax kale ka saar qoorta, dhegaha iyo farahaba.
7) Ha isku deyin inaad afka ku soo nuugto sunta, hana jeexin meesha dhaawaca ah taasoo keeni karta in infection, barar iyo caabuq yimaado.
8) Ugu danbayn tag meeshii kuugu dhow ee aad ka heli dawada loo isticmaalo qaniinyada maska.
Jalaal Bin Jacfar AlMakhzuumi